स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघलाई नवीन रुपान्तरणका साथ गतिशील बनाउँछौं : दीपेन्द्र कुँवर
स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघलाई नवीन रुपान्तरणका साथ गतिशील बनाउँछौं : दीपेन्द्र कुँवर स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ नेपाल (फेकन) को १०औं साधारणसभा
स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ नेपाल (फेकन) को १०औं साधारणसभा फागुन ८ गते हुँदैछ। साधारणसभाले नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ। फेकनको नयाँ नेतृत्वका लागि भुपाल तामाङ समूहले बुधबार उम्मेदवारी घोषणा गरेको छ। उक्त समूहबाट केन्द्रीय सदस्य पदका लागि थिङ्क एजुकेशनल कन्सल्ट्यान्सीका प्रबन्ध निर्देशक दीपेन्द्र कुँवरले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा क्रियाशील कुँवरसँग आगामी योजना, फेकनको गतिशीलता लगायतका सन्दर्भमा नेपाली पब्लिकका लागि आयुष चौलागाईले गरेको कुराकानीः
शैक्षिक परामर्श संघ नेपाल (फेकन) को केन्द्रीय सदस्य पदमा तपाईको उम्मेदवारी किन?
–नेपालमा क्रियाशील शैक्षिक परामर्शदाता र अध्ययनका लागि विदेश जान चाहने विद्यार्थीहरुलाई आफ्नो क्षमता, दक्षता र अनुभवका आधारमा उच्चस्तरीय परामर्श दिनु हाम्रो दायित्व हो। प्रथमतः नेपालमा क्रियाशील शैक्षिक परामर्शदाताले आफूलाई समयसापेक्ष अपग्रेड गर्दै लैजानुपर्छ। त्यसका लागि स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघले सरकार र सरोकारवालाहरुसँग समन्वय गरेर सबैलाई नीतिगत विषय एवं वैदेशिक अध्ययनका सन्दर्भमा सम्पूर्ण रुपमा सुसूचित गर्दै आएको छ। यो कार्यलाई अझै परिस्कृत र समयसापेक्ष रुपमा अगाडि बढाउनका लागि यसपटक ‘व्यावसायिक रुपले सक्षम फेकन, भावनात्मक रुपले एक फेकन’ को नारा तय गर्दै हामी नयाँ नेतृत्वका लागि होमिएका हौं। अबको युग युवाको युग हो। त्यसैले नेतृत्वमा युवालाई स्थापित गर्नुपर्छ। युवा पुस्तालाई जागरणका माध्यमबाट नेतृत्वसम्म पुर्‍याउने लक्ष्य मैले लिएको छु। युवालाई परिस्कृत र परिमार्जित समयक्रमसँगै नेतृत्वमा स्थापित गर्नकै लागि म निर्वाचनमा हाेमिएकाे हुँ। त्यसैले मैले पनि शैक्षिक परामर्शदाताका समस्या समाधान गर्न, विद्यार्थीको उच्च शिक्षा आर्जन गर्न पाउने मौलिक हकको सुनिश्चितताका लागि उम्मेदवारी दिएको हुँ।
तपाईको प्यानलले निर्वाचन जितेमा कसरी काम अगाडि बढाउने योजना बनाउनुभएको छ?
–अध्यक्ष पदका प्रत्यासी भुपाल तामाङसहित हाम्रो टिमले साझा कार्यक्रम निर्माण गरेको छ। १५ बुँदामा केन्द्रित हाम्रा योजना फेकनलाई व्यवस्थित गर्नेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध मजबुत बनाउनेसम्मका छन्। फेकनको सचिवालयलाई सम्पूर्ण व्यवसायी साथीहरुमाझ चलायमान बनाउने, व्यवसायिक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, शैक्षिक मेला आयोजना गर्ने, संघीय ढाँचाअनुसार फेकनको संगठन विस्तार गरिनेछ। त्यसैगरी, सदस्य संख्या दोब्बर बनाउने योजनामा हामी छौं।
शैक्षिक परामर्शको क्षेत्रमा वैदेशिक संस्थाहरुसँग कसरी समन्वय गर्नुहुन्छ?
–हामीले घोषणापत्रमा नै प्रष्ट पारिसकेका छौं कि, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुको सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्माणको पहल गरिनेछ। शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा हुने वैदेशिक लगानी फ्रेन्चाइज, कलेज डाइरेक्ट मार्केटिङ तथा आइटी प्लाटफर्महरुको पूर्ण नियमन र निरुत्साहित गर्नका लागि सरकारलाई आग्रह गर्ने नीति हामीले लिएका छौं। साथै विदेशस्थित कूटनीतिक निकाय र सरोकारवालाहरुसँग समन्वय र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध विस्तारका लागि पहल गरिनेछ।
फेकनको कोष वृद्धि गर्ने सन्दर्भमा तपाईहरुको योजना के छ?
–कुनै पनि संघसंस्थालाई चुस्तदुरुस्त रुपमा सञ्चालन गर्न र सदस्य एवं सरोकारवालाहरुको वृद्धि विकासका लागि कोष अपरिहार्य हुन्छ। त्यसैले हामीले चुनावी प्रतिबद्धता पत्रको सातौं नम्बरमा कोष वृद्धि गर्ने विषय उल्लेख गरेका छौं। फेकनको कोष वृद्धि गरी दुई वर्षभित्र एक करोड बनाउने हाम्रो टिमको लक्ष्य छ।
कोरोना प्रकोपपछि अध्ययनका लागि विदेश जान चाहने विद्यार्थीहरुको अवस्था कस्तो छ? र, फेकनले विद्यार्थीको हकहितका लागि केकस्ता योजना अघि सारेको छ?
–कोरोना प्रकोपपछि विद्यार्थी र अभिभावकमा केही नकरात्मक सन्देश पनि पुगेका छन्। तर, अहिले आएर ती भ्रम विस्तारै हट्दै गएका छन्। हामीले उचित परामर्श दिनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा कोरोनाको प्रभावका सन्दर्भमा जानकारी आदानप्रदान गरिरहेका छौं। त्यसैले अहिले विद्यार्थी र अभिभावक चिन्तामुक्त हुनुभएको छ। फेकनले विद्यार्थीको हकहितका सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण अवधारणा अघि सारेको छ। विद्यार्थी कल्याणकारी कोष निर्माण गर्न शिक्षा मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने हाम्रो योजना छ। विद्यार्थीको भिषा अस्वीकृत भएमा शिक्षण शुल्क बापत राज्यले लिएको २ प्रतिशत राजश्व विद्यार्थीलाई फिर्ता दिने व्यवस्था मिलाउन शिक्षा मन्त्रालयसँग समन्वय गरिनेछ साथै विद्यार्थीले पठाउने शिक्षण शुल्कको सम्बन्धमा इन्स्योरेन्स् कम्पनी र सरकारी निकायसँग समन्वय गरी इन्स्योरेन्स् गराउने व्यवस्था मिलाउन पहल गरिनेछ।
फेकनका सदस्य, मतदाता र शुभचिन्तकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ?
–फेकनको साधारणसभा फागुन ८ गते हुँदैछ। साधारणसभाले नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ। मैले केन्द्रीय सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिएको छु। यो उम्मेदवारी केवल पदका लागि मात्र दिइएको हैन। फेकनलाई नवीनतम ढंगले अगाडि बढाउन र समयसापेक्ष रुपमा संगठनलाई परिमार्जन गर्दै लैजाने सोचका साथ मैले उम्मेदवारी दिएको हुँ। अध्यक्ष पदका प्रत्यासी भुपाल तामाङसहित सम्पूर्ण पदाधिकारी अनुभवी, उर्जाशील र दक्ष हुनुहुन्छ। त्यसैले हाम्रो टिमलाई बहुमतका साथ विजयी गराएर सबैको सेवा गर्ने अवसर दिनुहुन्छ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु।
प्रकाशित मिति: बुधबार, फागुन ५, २०७७ २०:५७